Bright Archives - MoviesFan
Netflix ရဲ့ ဒေါ်လာသန်း ၉၀ တန် အလောင်းအစား – Bright !!
Entertainment channel တစ်ခုအနေကနေ ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရေးတွေထိပါ ခြေလှမ်းကျဲကျဲလှမ်းနေခဲ့တဲ့ Netflix ကတော့ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့မှာ နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး Will smith အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Suicide Squad ဒါရိုက်တာကြီး David Ayer ရိုက်ကူးထားတဲ့ Bright လို့ခေါ်တဲ့ Fantasy/Science fiction ကားကြီးကို release လုပ်တော့မှာပါ။ Netflix အတွက်၂၀၁၇အတွင်းမှာအသုံးစရိတ်အများဆုံးသုံးပြီးရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီးရိုက်ကူးစရိတ်ချည်းပဲကိုခန့်မှန်းကုန်ကျငွေကမီလျံ၉၀ကျော်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ လူသားတွေသာမကပဲ orc, fairies, Elves, Centaurs နဲ့ Dwarves တွေစတဲ့ ကာရိုက်တာအစုံအလင်ပါဝင်ပြီး မြင်တွေ့နေကျကားတွေနဲ့ မတူပဲ လူတိုင်းသဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမယ့် အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်မှာပါလို့ Detective Ward (Will Smith) က ပြောခဲ့ပါတယ်။
လူသားတွေနဲ့ Orc တွေတူတူလက်တွဲလုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ လူတိုင်းကလိုချင်နေတဲ့ လက်နက်ကိုလိုက်ရှာရင်း မျှော်လင့်မထားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ပိတ်ကားပေါ်မှာမဟုတ်ပဲ Netflix ပေါ်မှာပဲရှုစားကြည့်ပါလို့…….
No actual orcs were harmed in the making of #BrightMovie. We had @joeledgerton1 take the heat as Officer Jakoby. pic.twitter.com/qNZcnqPGVF
— Bright Film (@BrightNetflix) December 24, 2017
Bright ဇာတ်ကားဟာ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာမပြပဲ Netflix site မှာသာ အထူးသီးသန့်ပြသမယ့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ bright premiere မှာ ပြောခဲ့တဲ့ Will Smith ရဲ့စကားအရဆိုရင်တော့ သူ့အနေနဲ့ ဒီဇာတ်ကားရိုက်ကူးရတာ ပျော်ခဲ့ရတဲ့ အပြင် Box office ဝင်မှာမဝင်မှာစိတ်ပူစရာမလိုတဲ့အတွက်စိတ်သက်သာရာရနေပုံပါပဲ။
နောက်ဆက်တွဲသတင်းအနေနဲ့ ဝေဖန်ရေးဆရာကြီးတွေကတော့ Bright ကို ၂၀၁၇ အတွက် ငွေအဖြုန်းတီးဆုံးကား၊ မကြည့်သင့်ဆုံးကားနဲ့ စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးကား ဆိုပြီး ကောင်းကောင်းထောမနာပေးထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားကောင်းတဲ့ review တွေလဲရှိသေးတဲ့အပြင် Netflix ကတော့ ဘယ်သူဘာပြောပြော Bright အတွက် Sequel ဇာတ်ကားတွေကိုတောင် ပြင်ဆင်နေပါပြီ။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပြောပြော ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရမှ ကောင်းမကောင်းသိနိုင်တာမို့ Bright ကို Netflix ပေါ်မှာစောင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်…
Image source : www.facebook.com/Will-Smith
Bright, Fantasy, Netflix, Science Fiction